लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा थप चार सेवा विस्तार, कोभिड इमर्जेन्सीसहित ट्रमा वार्डसम्म | ईमाउण्टेन समाचार
बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले एकै पटक चार वटा सेवा बिस्तार गरेको छ । १० बेडको डायलाइसिस सेवासहित ट्रमा वार्ड, कोभिड इमर्जेन्सी र भिसिटिङ्ग सेवा विस्तार भएको हो ।
विस्तारित सेवाको लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री ईन्द्रजित थारुले शुभारम्भ गरेका हुन् । अस्पतालमा यसअघि रहेको ६ बेडको डायलाइसिस सेवालाई १० बेडमा बिस्तार गरिएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री थारुले रेड्रो पोजेटिभ र हेपाटाइटिस बी तथा सिका बिरामीका लागि दुई बेड प्रदान गरिने जानकारी दिए ।
अस्पतालमा सेवा विस्तार भएपछि उपचारमा थप सहजता आउने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ईन्द्र ढकालले बताए । अस्पतालमा सेवा सुविधा विस्तार हुने क्रम जारी रहेको र प्रादेशिक अस्पताल बनेपछि सुधारका लागि धेरै काम भएको उनले बताए ।
बिहीबारदेखि विस्तार भएको ट्रमा वार्डमा अर्थोपेडिक चिकित्सक २४सैं घण्टा खटिने पनि ढकालले बताए । यसैगरी, अस्पतालले आईसियू २० बेडसहित जनरल र इमर्जेन्सी गरी २७ बेडको कोभिड इमरजेन्सी सेवा पनि बिस्तार गरेको छ । अब कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा थप सहजता आउने ढकालले बताए ।
अस्पतालले यसअघि पनि करिब आधा दर्जन सेवा विस्तार गरेको थियो । एउटा अक्सिजन प्लान्ट रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा केही महिनाअघि थप एउटा जडान भइ दुई वटा प्लान्ट पुगेको छ भने थप एउटा प्लान्ट जडान प्रक्रियामा छ । अस्पतालमा अब क्यालेस प्रणाली अपनाइने र यसको तयारी भैरहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ढकालले बताए । एक वर्षदेखि रोकिएको आमा सुरक्षाभत्ता पनि अस्पतालले उपलव्ध गराउन थालेको छ ।
कोभिड भत्ता मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको र छिट्टै चिकित्सक तथा कर्मचारीले पाउने उनले जानकारी दिए । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि १० तला भवनको गुरुयोजना बनाइ काम अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै, अस्पतालमा एमआरआई र क्याथ ल्याब सेवा अगाडि बढाउन टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भैरहेको छ ।
स्वास्थ्य‐मा वर्गिकृतlumbeni pardesh, lumbenipardesh